Chii chinonzi deworm? | Noti Katsi
Chii chinonzi deworm?
Huru yedu yehunhu inogona kukanganiswa nhevedzano yezvipembenene, senge nhata kana zvikwekwe, asiwo nezvipembenene zvemukati zvakaita sehonye dzerudzi toxocara cati. Kuti uwane kuchengetedzeka uye hutano, zvakakosha kwazvo kuidonhedza nguva nenguva, nekuti zvikasadaro tinogona kuisa hupenyu hwako panjodzi.
Naizvozvo, tinotsanangura chii chiri kuita dewm uye ungachiite sei.
1 Chii chinonzi deworm?
2 Ndirini paunogona kuita deworm katsi?
3 Iwe kangani iwe unofanirwa kuita deworm kati?
3.1 Kunze kuita nyungu
3.2 Yemukati deworming
4 Deworming mumakati madiki uye katsi dzevakuru
5 Ndinoziva sei kuti katsi yangu ine makonye?
5.1 Nhata nehonye
6 Katsi yangu ine hutano here mushure mekubuda?
Deworming ndiyo kubviswa kwezvipembenene kubva mumuviri, mune ino mamiriro, katsi. Kune maviri emhando:
Kunze kuita nyungu: inobvisa hutachiona hwekunze, kureva kuti, izvo zvinoramba zvakanamatira paganda, senge mite, nhata, zvikwekwe, inda.
Yemukati deworming: inobvisa zvipembenene zvemukati, kureva kuti, ura hwemukati nehonye.
Ndirini paunogona kuita deworm katsi?
Kana iwe uchangobva kutora kana kutora katsi, iwe unofanirwa kuziva kuti, kunze kwekunge yatowana kurapwa kweantiparasite, zvingangoita kuti ine zvemukati uye pamwe zvekunze zvipembenene. Saka, zvakanaka kumuendesa kun'anga kuti akupe mushonga (Kana iwe uri kuSpain, anogona kunge achinyorera Telmin Unidia, iyo yaunofanirwa kuipa kwemazuva mashanu uyezve mushure memasvondo maviri) uye antiparasitic spray, Frontline ichikurudzirwa zvakanyanya nekuti inogona kuiswa mushure memazuva maviri ehupenyu.
Iwe kangani iwe unofanirwa kuita deworm kati?
Kunze kuita nyungu
Iko kushandiswa kweantiparasite pipettes, kupuruzira uye / kana makorari zvinokurudzirwa kubva muchirimo kusvika mukupera kwezhizha / kutanga kwekutanga, kunyanya kana mhuka ichienda kunze.
Kubvisa uye / kana kudzivirira kuwanda kwezvipembenene zvemukati, mushonga unodzivirira utachiona kana piritsi rinokurudzirwa nachiremba wemhuka rinofanirwa kupihwa. Mazuva gumi nemashanu pamberi pekudzivirira uyezve kamwe chete pamwedzi.
Deworming mumakati madiki uye katsi dzevakuru
Kana ichigamuchirwa, inogamuchirwa uye muchidimbu, apo katsi inopinda senhengo itsva yemhuri, zvinonakidza kwazvo! Uye hazvisi zvishoma. Katsi zvinhu zvakanaka zvinozoita kuti hupenyu hwako huve nani ... Asi zvakafanira kuti uzvidzore sezvatatsanangura pamusoro. Kunyangwe, zvakafanana kune katsi dzevakuru sezvazviri kune katsi diki? Ngatione.
Kittens. Pakutanga kurapwa kunofanirwa kutanga aine mavhiki matatu uyezve sekurairwa nachiremba wemhuka. Kana marapirwo ekutanga apera, kurudziro ndeyekudhonzera kati kamwe chete pamwedzi kudzivirira makonye mumoyo kana mumatumbu. Wako veterinarian achafanirwa kuita yakanaka yekutevera uye kugadzirisa marapirwo zvichienderana nekushanduka kweako mudiki feline.
Katsi dzevakuru. Kana iyo katsi yave munhu mukuru, uye iwe wakatozoita dewmw iyo payanga iri diki, yako yakakura katsi inofanirwa kupihwa pamwedzi kudzivirira mukati megore rose. Pamusoro pezvo, bvunzo dzechikafu dzinofanirwa kuitwa kaviri kana katatu pagore, zvinoenderana nemararamiro ekitsi, kuti anobva mumba kana kwete. Kana iwe ukatora katsi yechikuru, iwe uchafanirwa kuenda naye nekukurumidza kuna vet kuti amubvise dewm uye aongorore hutano hwake.
Katsi yakangosvika pamba pako. Kunyangwe iyo katsi yakura zvakadii, zvinodikanwa kuti iwe uende naye kuna vet kutanga atarise hutano hwake uye kumuita iye dewm nekukurumidza sezvazvinogona. Ipapo zvinoenderana nemamiriro ehutano, chiremba wako wemhuka anogona kukurudzira kumubvisa honye kamwe chete pamwedzi kana nekukurumidza zvichienderana nekuti anoona sei hutano hwekatsi yako.
Ndinoziva sei kuti katsi yangu ine makonye?
Kana kitsi dziine makonye, ​​kazhinji hadzina zviratidzo zvinooneka. Kunyangwe dzimwe nguva iwe unogona kuona mamwe machena machena muchigaro kana mumarutsi. Vanotoita kunge mazai kunge zvidimbu zvemupunga muchena.
Kana kati iine chirwere chakakomba chehonye Inogona kukonzera mhando dzese dzezviratidzo: kurutsa, manyoka, kuonda, uye kurwadziwa mune anus. Kunyangwe iri katsi diki, inogona kuve nematambudziko ekukura kana dumbu rakazvimba.
Chero zvazviri, iwe unozogara uchifanira kuenda nekukurumidza kuna vet kuti uone yakatarwa katsi uye nenzira iyi inogona kubata mamiriro acho nenzira inokurumidza uye inoshanda kwazvo zvinogoneka.
Makitsi vanogona zvakare kuwana makonye kubva mazai enhata vanogona kuva uye vane hutachiona. Ndokusaka zvakakoshawo kurapa katsi nhata nekukasira uye kudzivirira kana vasina. Izvi zvinofanirwa kuitwa nguva zhinji, kunyanya kana kati ikabatwa kubva mumugwagwa kana kana ichiwanzo famba kunze.
Izvi zvakakosha kuti zviitwe nguva zhinji mukuwedzera kune deworming. Ukasadaro, nhata nehonye zvinoramba zvichikura nekugara mumuviri wako uye zvichaonekwa nezvirwere uye chinhu chakanyanya kuipa ndechekuti zvinogonawo kukutapura. Saka Izvo zvakakosha kuti iwe ugare uchichengeta mudiwa wako mukomana mune hutano hwakanaka.
Katsi yangu ine hutano here mushure mekubuda?
Kuti uzive kana katsi yako iine hutano kana kwete, zvinoenderana nezvinhu zvinoverengeka kwete chete kana yakave deworm kana kwete. Inofanirwa kuve nechikafu chakanaka kuitira kuti ikure yakasimba uye iine hutano, chengetedza chiitiko chezuva nezuva (tamba nekatsi yako), kurara zvakanaka, kuchengetwa kwemuviri, kuti isashaye majekiseni ayo ... Maitiro ekatsi yako anokuudza kana iri hutano kana kwete.hunhu hunoshanda hunokuratidza kuti zvakanaka uye Kuita kwakanyanya kusingaite kunogona kukonzera kuti unetseke.
Iwe unofanirwa kuongorora ganda ravo nejasi kuti uzive kuti zvese zviri kufamba mushe. Kana iro ganda rakatsetseka, rine mhanza, kana rakakuvara ganda, saka iri rinogona kunge riri dambudziko raunofanirwa kutarisa kuna chiremba.
Zvimwe chetezvo nenhata, ongorora kuti une nhata here kana kuti kwete. Kuti uzive, tarisa marara avo uye kana iine mavara matema, nyorova chituru uye kana chatsvuka, zvinoreva kuti chine nhata.
Chero nzira, chakakosha ndechekuti kana iwe ukaona chero kusanzwisisika kuoneka mukati kako, usamirira kuti nguva ipfuure kana "inopfuura iri yoga." Zvakakosha kuti iwe uende naye kun'anga kuti uone kana paine mamiriro anoda kurapwa.
Nemazano aya, shuwa kuti furry yedu ichave noutano hwakanaka kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Chii chinonzi deworm?
Sei katsi dzichiita sehove